रोमाञ्चक पुरस्कार कमाउने तरिका - Shiv's Era
रोमाञ्चक पुरस्कार कमाउने तरिका
आफ्नो cryptocurrency staking को लागी पुरस्कार कमाउनुहोस्
क्रिप्टोकरेन्सी जसले स्ट्याकिङलाई अनुमति दिन्छ परम्परागत बैंकिङ भन्दा उच्च पुरस्कार प्रदान गर्दछ
cryptocurrencies को एक विस्तृत श्रृंखला को पहुँच
आफ्नो कम्प्युटर अन राख्न आवश्यक छैन
Cryptocurrency Staking के हो, र तपाइँ किन यो गर्न चाहनुहुन्छ?
क्रिप्टोकरेन्सी स्ट्याकिंगको प्राथमिक फाइदा भनेको तपाईंले थप क्रिप्टोकरन्सीहरू कमाउनुहुन्छ, र ब्याज दरहरू धेरै उदार हुन सक्छन्। केहि अवस्थामा तपाईले प्रति वर्ष 10% वा 20% भन्दा बढी कमाउन सक्नुहुन्छ। यो सम्भावित रूपमा तपाइँको पैसा लगानी गर्न को लागी एक धेरै लाभदायक तरीका हो।
Staking क्रिप्टोकरन्सीहरूमा मूल्य निर्धारण र भुक्तानीको लागि बढ्दो लोकप्रिय मोडेल बनिरहेको छ
Staking cryptocurrency को साथ उपलब्ध छ जसले “प्रूफ-अफ-स्टेक” मोडेल प्रयोग गरी भुक्तानीहरू प्रशोधन गर्दछ। यदि तपाइँको स्वामित्वमा रहेको क्रिप्टोकरेन्सीले स्ट्याकिङलाई अनुमति दिन्छ भने, तपाइँ समयसँगै उत्साहजनक प्रतिशत पुरस्कारहरू कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईंको क्रिप्टोले स्ट्याक गर्दा पुरस्कार कमाउने कारण यो हो कि ब्लकचेनले यसलाई काममा राख्छ।
सबै क्रिप्टोकरन्सीहरूले स्ट्याकिंगलाई अनुमति दिँदैनन्; यहाँ छ किन Cardano, Polkadot, र Solana ले यसलाई समर्थन गर्दछ
Bitcoin सहित सबै क्रिप्टोकरन्सीहरूले स्ट्याकिङलाई अनुमति दिँदैनन्। तर अझै, त्यहाँ कार्डानो, पोल्काडोट, र सोलाना जस्ता धेरै क्रिप्टोकरन्सीहरू छन् जसले यसलाई अनुमति दिन्छ।
तपाईको स्मार्टफोनमा बिटकोइन कसरी किन्न सकिन्छ
तपाईंसँग त्यो विशिष्ट क्रिप्टोकरन्सीको लागि आवश्यक न्यूनतम ब्यालेन्स हुनुपर्छ। तपाईंले Binance, coinbase, AQRU, crypto.com, र थप जस्ता प्लेटफर्महरूमा योग्य क्रिप्टोकरेन्सी होल्ड गर्नुपर्छ।
स्टेकको प्रमाणले क्रिप्टोकरेन्सीलाई कसरी असर गर्छ?
अन-चेन क्रिप्टोकरेन्सी स्ट्याकिंगले तपाईंलाई ब्लकचेन प्रूफ अफ स्ट्याक प्रोटोकलहरू जस्तै Tezos मार्फत आफ्नो सम्पत्तिहरू दाँत गर्न अनुमति दिन्छ। अफ-चेन स्ट्याकिंग योग्य देशहरूको लागि मात्र उपलब्ध छ। त्यहाँ जहिले पनि स्टेकिंगसँग सम्बन्धित जोखिम हुन्छ किनभने क्रिप्टो मूल्यहरू अस्थिर हुन्छन्।